हेपेटाइटिस एक भ्याक्सिन: तपाईलाई खोप चाहिन्छ? - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण समाचार खेलहरु स्वास्थ्य कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण घरपालुवा जनावर प्रेस समुदाय, कम्पनी भारी खेल कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, समाचार
मुख्य >> औषधि जानकारी >> के तपाई हेपेटाइटिस ए खोप लिनुहुन्छ?
के तपाई हेपेटाइटिस ए खोप लिनुहुन्छ?
हेपाटाइटिस A (hep A) सबै समाचारमा छ। फिलाडेल्फिया मा पछिल्लो महिना, स्वास्थ्य अधिकारीहरु चेतावनी दिए एक सेन्टर सिटी रेस्टुरेन्टमा एक्सपोजरको एक खाना-सेवा कार्यकर्ताले भाइरसको लागि सकरात्मक परीक्षण गरे। Aldi र Raley को याद आयो स्थिर बेरी एक सम्भावित हेप एक संदूषण पछि। यो वर्ष, को राज्यहरु फ्लोरिडा र नयाँ जर्सी हेप एको अवस्था चल्दै गएकोले अवस्थाको प्रकोप देखिएको छ। रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू (CDC) रिपोर्टहरू छन् व्यापक व्यक्ति देखि व्यक्ति देशभरि हेप A को प्रसारण, संक्रमण को मामला संग संग २०११ देखि २०१ from सम्म १ 140०% ।
हेप ए सामान्यतया एक आत्म-सीमित, हल्का रोग हो, तर यो घातक हुन सक्छ, विशेष गरी बुढेसकालमा वा जीर्ण रोगको रोगले ग्रस्त मानिसहरूलाई। तपाईले हेप ए पाउन सक्नुहुन्छ खाना खाई वा पानी पिउँदा पनि हेपाटाइटिस ए भाइरस (एचएभी) बाट दागिएको न्यून मात्रामा मलले दूषित। यो खाना श्रृ chain्खलाको साथ कहिँ पनि हुन सक्छ - बढ्दै गरेको खानाबाट प्रशोधन गर्न र सेवामा। संक्रमित मलले माटोको सतहलाई छोएर र त्यसपछि तपाईंको मुखलाई छोएर, संक्रमित साथीसँगको सेक्सको माध्यमबाट र फोहोर चीजहरूको आदानप्रदानबाट पनि हेप ए लाई पास गर्न सकिन्छ विशेष गरी हेप संक्रमित सुईहरू। शुभ समाचार: त्यहाँ हेपेटाइटिस ए खोप छ। गर्नुहोस् तपाईं एउटा चाहियो?
xarelto को लागी सामान्य नाम के हो
हेपेटाइटिस ए को खोप को आवश्यक छ?
हेप एको बढ्दो संख्याले के देखाउँदछ भने पनि, संक्रमण एक रोकथाम हो। दुई भाग हिप ए भ्याक्सिनको मात्र एक खुराकले inated%% खोपयुक्त वयस्कहरूलाई दिन्छ सुरक्षा चार हप्ता भित्र; लगभग १००% वयस्कहरूले दोस्रो खुराक पछि सुरक्षा पाउँछन्, जुन छ महिना पछि दिइन्छ।
अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्सका अनुसार बच्चाहरूलाई नियमित रूपमा बिरामीको बिरूद्ध खोप लगाईन्छ १२ र २ months महिना उमेर । यसको मुख्य कारण यो हो कि साना बच्चाहरू, जो प्रायः asymptomatic छन्, प्रसारणको ठूलो स्रोत हुन सक्छ, विशेष गरी डे केयर सेन्टरहरूमा [जहाँ फोहोर डायपर नियमित रूपमा परिवर्तन हुन्छ र उचित हात धुने सम्भावना हुन्छ], भन्छन्। ब्लेन होलिन्जर, MD , अमेरिकी लिभर फाउन्डेशनको राष्ट्रिय चिकित्सा सल्लाहकार समितिको सदस्य।
साना बच्चाहरूको साथसाथै, सीडीसीले जोखिमयुक्त समूहमा जो कोहीलाई पनि खोप दिने सल्लाह दिन्छ। यसमा ती व्यक्तिहरू समावेश छन्:
छन् यात्रा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई जहाँ उचित सरसफाइ अपर्याप्त हुन सक्छ
ड्रग प्रयोगकर्ताहरू हुन्
पुरुषहरू जो पुरुषसँग यौन सम्पर्क राख्छन्
घरविहीन हो वा साबुन र बगिरहेको पानीको सजिलो पहुँच बिना बाँचिरहेका छन्
हेपेटाइटिस बी वा हेपेटाइटिस सी जस्ता दीर्घकालीन लिवर रोग भएको छ
जबकि हेपाटाइटिस ए को लागी जोखिम समूह बाहेकका लागि सम्भावना कम छ, केही विज्ञहरु भन्छन् खोप लगाउनुमा केही गलत छैन। यो खोप एकदम सुरक्षित र अत्यधिक प्रभावकारी छ, एमडी, एमडी, सं.रा. का संक्रमित रोगहरूको प्राध्यापक बताउँछिन् हर्बर्ट वर्टहिम कलेज अफ मेडिसिन मियामी मा। जबसम्म तपाईंसँग खोपको लागि contraindication छैन,चिकित्सकीय रूपमा, तपाईले यो पाउनु हुन्न भन्ने कुनै कारण छैन। मतभेदमा गम्भीर बिरामीको लागि मध्यम हुनु समावेश छ (तर तपाइँ निको हुन सक्दो यो खोप प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ), वा खोपका केही भागहरूमा एलर्जी समावेश छ।
हेपेटाइटिस ए भ्याक्सिन - ब्राण्ड नामहरू द्वारा परिचित Havrix र भक्त यो एक निष्क्रिय भाइरस को साथ बनेको छ र धेरै सुरक्षित मानिन्छ। मुख्य अन्य असर हेप ए खोप भनेको इंजेक्शन साइटको वरिपरि दुखाइ हो। दुर्लभ दुष्प्रभावहरूमा टाउको दुख्ने, थकान, र (धेरै विरलै) एलर्जीको प्रतिक्रिया समावेश छ, जसले सास फेर्न कठिनाई प्रकट गर्दछ, उच्च ज्वरो, पित्ती, र छिटो हृदयको धड्कन।
खोप हेपाटाइटिस A को बिरूद्ध सबै भन्दा राम्रो सुरक्षा हो, तर यसका अतिरिक्त तरीकाहरू छन् सेफगार्ड आफैं
साबुन र न्यानो पानीले हात धुनुहोस् १ bathroom- using० सेकेन्डको लागि बाथरूम प्रयोग गरिसकेपछि, डायपर परिवर्तन गरेपछि, र खाना ह्यान्डल गर्नु अघि।
सबै फलफूल र तरकारीहरू राम्रोसँग धुनुहोस् , विशेष गरी जामुन (हेप ए बीज द्वारा गठन ग्रूव्स मा लुक्न सक्छ)।
खाना पकाउनुहोस् कुनै पनि संदूषण मार्न उचित तापमानमा।
केवल बोतलको पानी पिउनुहोस् जब विकासोन्मुख देशको भ्रमण गर्ने। बोतलको पानी दाँत माझ्नुहोस् र फल र तरकारीहरू धुनुहोस्।
खाद्यान्न ट्रकहरू जस्ता ठाउँहरूमा खाँदा सावधानी अपनाउनुहोस् । कर्मचारीले खाना-सुरक्षा स्वच्छता अभ्यास गर्दछन् कि अवलोकन गर्नुहोस् (जस्तै ग्लोभज लगाउनु, र पैसा चलाउनु हुँदैन, त्यसपछि खाना)। चलिरहेको पानी उपलब्ध छ कि छैन नोट गर्नुहोस्। खाद्य ट्रकहरू हुन् निरीक्षण गरिएको स्थानीय र राज्य स्वास्थ्य विभागहरू / एजेन्सीहरू द्वारा, तर मानक फरक फरक हुन्छ। उनीहरूको भर्खरको निरीक्षण रिपोर्ट हेर्न सोध्नुहोस्।
यी चरणहरू, र उचित खोपका साथ, तपाईं संक्रमणबाट बच्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको राज्यमा प्रकोप रोक्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। तिमी सक्छौ पैसा बचत गर्नुहोस् एकलकेयरको कूपनको साथमा हेप ए खोप र अन्य खोपहरूमा।
नेबुलाइजर भनेको के हो? यो कसरी काम गर्दछ जान्नुहोस् र किन तपाईंलाई एउटा आवश्यक हुन सक्छ
Ritalin vs. Adderall: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
के म zoloft संग tylenol pm लिन सक्छु
सबै भन्दा राम्रो गैर सुक्खा antihistamine के हो
खाने र पिउन को लागी जब तपाइँ फ्लू हुनुहुन्छ
कसरी आपतकालीन मा चाँडै रक्तचाप कम गर्न
valacyclovir र acyclovir बीच के फरक छ?
चिसो संग नाक कहिले सम्म बग्छ?